အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ပါ ဘာသာရေးစော်ကားမှု ဘာသာပေါင်းစုံအကြီးအကဲများ စုပေါင်းရှုတ်ချ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ရိုဟင်ဂျာများကို ဘင်္ဂါလီများအဖြစ် စာရင်းကောက်နေမှု ရပ်တန့်ရန် ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက် ထုတ်ပြန်
ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ”လူ”တွေ ခေတ္တခဏဖြစ်ဖြစ် စိတ်ချမ်းလက်သာနဲ့ နားခိုရာရစေချင်ပါတယ် »
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ပါ ဘာသာရေးစော်ကားမှု ဘာသာပေါင်းစုံအကြီးအကဲများ စုပေါင်းရှုတ်ချ
အောင်အောင်(မန္တလေး) နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၄ Myanmar Muslim Media
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ပါ ဘာသာရေးစော်ကားမှုအရေးအသားတွေကို မြန်မာနိင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံက ဘာသာရေးအကြီးအကဲတွေကရူတ်ချကြောင်း ဘာသာကိုယ်စီအေးချမ်းသည် ဒို့တတွေရှောင်ရှားအမုန်းတရားလို့အမည်ပေးထားတဲ့
မန္တလေးမြို့ ကံတက်ကုန်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နုိုဝင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ သာပေါင်းစုံအခမ်းအနားမှာ ဘာသာကြီး ၄ ရပ်က ခေါင်းဆောင်အသီးသီးက မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလောက်တောင်မှအသိတရားနည်းသလားဆိုတဲ့ဒေါမနသကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်”လို့ ခရစ်ယန်အသင်းတော်များကောင်စီ(မန္တလေး) ဥက္ကဌ သိက္ခာတော်ရ ဆရာ ဦးကျော်ရွှေ က ဘာသာပေါင်းစုံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ပါ မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲရေးသားချက်တွေကိုရည်ညွန်းပြီးအထက်ပါအတုိုင်းသုံးသပ်ပါတယ်။
မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးဇောင်းပေးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြုဂျာနယ် အောင်ဇေယျ ဂျာနယ်အမှတ် ၄၄ မှာ ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်ထုတစ်ရပ်လုံးချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ကို ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာစော်ကားရေးသားထားချက်တွေကိုဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အတွက် ဘာသာပေါင်းစုံကအခုလိုကန့်ကွက်ကြောင်းရှုတ်ချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
“မိမိစားဝတ်နေရေးတစ်ခု၊မိမိဂျာနယ်တစ်ခုကောင်းစားရေးကိုသာကြည့်ပြီး သူတစ်ပါးတွေကိုထိခုိုက်နစ်နာ အောင် စာပေတွေ အရေးအသားတွေကိုတော့ မရေးသားသင့်ဘူး၊သူတော်ကောင်းတို့အလုပ်မဟုတ်ဘူး လုို့မြင်တယ်လေ”လို့ ဆရာတော် ဦးဝိသုတ က အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ရဲ့ အရေးအသားနဲ့ပတ်သက်လုို့ Myanmar Muslim Media ရဲ့ သီးသန့် မေးမြန်းချက်တစ်ရပ်မှာပြန်လည်မိန့်ကြားပါတယ်။
အောင်ဇေယျတုဂျာနယ် အမှတ် ၄၄ ပါရေးသားချက်တွေဟာနိင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၄၊ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ပုဒ်မ ၃၆၂၊ ၃၆၃ ၊၃၆၄ တို့အားလည်းကောင်း သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပုဒ်မ ၉ ၊ပုဒ်မခွဲ(ဇ)(ဈ)နှင့် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း ဥပဒေပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တုို့အားလည်းကောင်း ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာရောက်တယ်လို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာနိင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)ထံသို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တုိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင်ပေးပို့သည့်စာတွင်ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
“တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရဲ့ နာမည်ကိုတောင်အမှန်မရေးနိင်ဘူး။နာမည်ကိုတောင်မှန်အောင်မရေးနိင်တဲ့သူက အကြောင်းအရာဆိုတာအဝေးကြီးပဲ”လို့ အယ်ဟာဂ်ျ မုဖ်သီဒေါက်တာမြင့်သိန်းက အထက်ပါအခမ်းအနားမှာပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်ပါ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ရေးသားထားချက်တွေဟာ လိမ်လည်မှုလည့်ဖြားမှုတွေသာဖြစ်တယ်လုို့လည်း မုဖ်သီ ဒေါက်တာ မြင့်သိန်းက ဝေဖန်ပါတယ်။
“နိင်ငံတော်မှာလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ အရေးယူဖုို့လိုပါတယ်။..ကိုယ့်စားဝတ်နေရေး ရေးချင်တာလျှောက်ရေးနေရင်တော့ အခုလိုဘဲ ကျွန်တော်တုို့အတွက် နစ်နာမှုတွေရှိပါတယ်”လို့ ဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးကံကောင်းက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အောင်ဇေယျတုဂျာနယ် အမှတ် ၄၄ ပါရေးသားချက်တွေကို ရည်ညွန်းပြီး ဒီရေးသားချက်တွေဟာ “စော်ကားတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက် လုံးဝလက်မခံနိင်ပါဘူး”လို့လည်း ဦးကံကောင်းက မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
မြန်မာ့သမိုင်းဝင် ၁၃၀၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံပေါ်ပေါက်ဖုို့နီးကပ်လာချိန်မှာ လူထုကိုအာရုံလွဲဖို့အတွက် ကုလား ဗမာအထိကရုန်းကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ဖန်တီးပေးဖူးတဲ့ရာဇ၀င်ရှိတဲ့အတွက် ဒီလိုလုပ်ရပ်ဟာ “ကုလားဖြူကလုပ်တဲ့ ကုလားလမ်းစဉ်”လို့ ခလီဖွှာဦးသိန်းဝင်းအောင်က သုံးသပ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တုို့အချင်းချင်းကိုသွေးခွဲဖုို့ ဆိုတာ ကုလားဖြူညာဏ်၊ အင်္ဂလိပ်ညာဏ်။အဲဒီတော့အခုလည်း ကုလားတွေရဲ့ ပယောဂမကင်းဘူး။ဟိုနိင်ငံဒီနိင်ငံကကုလားတွေကမြှောက်ပေးနေတယ်။ကျွန်တော်တုို့မွတ်စလင်မ်အချင်းချင်း ကျွန်တော်တုို့မြန်မာအချင်းချင်းကို သွေးကွဲအောင်လုပ်ပေးနေတယ်”လုို့ ခလီဖွှာဦးသိန်းဝင်းအောင်က အထက်ပါစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားမှာပြောပါတယ်။
မကြာသေးမှီကာလက ကုလားနိင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့သီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BBS နဲ့ ဘာသာရေးအဓိကရုန်းမှုထောင်ထွက် ၀ီရသူသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာန်ိင်ငံမှာ မွတ်စလင်မ်မုန်းတီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအသက်ဆက်နေသေးတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်ကတော့ နိင်ငံရေးအာရုံပြောင်းလှည့်ကွက်တွေကို ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဂရုပြုထားဖို့မကြာမီကာလကပဲတုိုက်တွန်းထားပါတယ်။
This entry was posted on November 2, 2014 at 11:09 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.